FITATERANA AN-TARIBY : Hanomboka anio ny fakan-kevitra eny amin’ireo fokontany voakasiky ny tetikasa – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:39
Efa miroso ny fanaovana Tombana ara-tontolo iainana.
Accueil/Songadim-baovao/FITATERANA AN-TARIBY : Hanomboka anio ny fakan-kevitra eny amin’ireo fokontany voakasiky ny tetikasa
Miroso amin'ny antsakany sy andavany ny fanaovana tombana ara-tontolo iainana ny tetikasa fametrahana fitaterana an-tariby na ny "Téléphérique" ankehitriny. Araka ny fanazavan'ny komity teknika misahana ny fanaovana tombana ara-tontolo iainana ny tetikasa, dia hanomboka anio no hipetraka eny anivon'ireo fokontany sy ireo boriborintany voakasiky ny tetikasa ny taratasy fakan-kevitra ho an'ny daholobe, izay handraisana ny hevitry ny tsirairay.
Ny faha 19 novambra 2021 lasa teo no namoaka ny “Note de Recevabilité” ho an’ny Tetikasa “Téléphérique” ny ofisim-pirenena momba ny tontolo iainana (ONE). Araka ny nambaran’ny Tale Jeneralin’ny ONE, Rakotoson Rija, dia efa nanomboka tamin’ireo daty io ihany koa ny fanaovana ny fanombanana ara-tontolo iainana izay tontosain’ny komity teknika manokana ahitana ireo teknisianina isaky ny Ministera voakasika. Tafiditra ao anatin’izany ny Minisiteran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy, ny Secreteram-panjakana miadidy ny Tanàna vaovao sy ny Toeram-ponenana, ny Minisiteran’ny Fitaterana, ny Minisiteran’ny Asa Vaventy, ny Minisiteran’ny Fanajariana ny Tany sy ny Fananantany, ny Minisiteran’ny Angovo, ny Minisiteran’ny Kolontsaina, ny Minisiteran’ny Mponina, ary Kaominina Antananarivo Renivohitra. Haharitra 60 andro ireo fanombanana ara-tontolo iainana io, ary lafin-javatra maro no tsy maintsy hatao ao anatin’izany. Tsara marihina fa ireo tetikasa goavana rehetra mandeha sy efa nandeha ary mbola handeha eto amin’ny firenena dia tsy maintsy mandalo io fanombanana ara-tontolo iainana io avokoa.
Fihaonana mivantana amin’ny 14 Desambra 2021 izao
Mifanindran-dalana amin’ny fanombanana ara-tontolo iainana ihany koa anefa ny tombana ara-tsosialy. Ao anatin’io no misy ny fampandraisana anjaran’ny vahoaka, mandritra ny dingana fanaovana fanombanana mialoha ny tetikasa. Araka ny fanazavana hatrany dia efa misy lalàna mihitsy eto amintsika mamaritra ny tsy maintsy hanatanterahana izany, dia ny didim-pitondrana laharana faha-6830/2001 tamin’ny 28 jona 2001. Nitondra fanazavana, araka izany, ireo ao anatin’ny Komity teknika manatontosa ny tombana, fa hisy ny fakan-kevitra eny anivon’ny Fokontany sy ny Boriborintany manomboka anio, ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 29 Desambra 2021 ho avy izao. Endrika telo no hisehoan’izany. Voalohany ny taratasy fakan-kevitra izay apetraka eny amin’ny Fokontany sy Boriborintany voakasiky ny tetikasa. Isan’izany ny boriborintany voalohany, ny boriborintany faharoa, ny boriborintany fahatelo, ny boriborintany fahefatra, ary ny boriborintany fahadimy. Araka izany, ny boriborintany fahenina irery ihany no tsy voakasiky ny tetikasa. Raha ny fanazavan’ny Tale Jeneralin’ny ONE hatrany dia azon’ny olom-pirenena rehetra tsy ankanavaka ny manoratra ao anatin’ireo taratasy fakan-kevitra ireo, izay fanontaniana manitikitika mahakasika ny tetikasa, na koa fanamarihana, na lafin-javatra hafa. Endrika faharoan’ny fakan-kevitra izay ho atao ihany koa ny fihaonana mivantana eo amin’ireo tomponandraikitry ny tetikasa sy ireo olom-pirenena tsy ankanavaka, ny 14 Desambra 2021 ho avy izao, izay hatao etsy amin’ny Kianja Mitafo Mahamasina. Ary farany dia azon’ny rehetra atao ny manoratra mivantana eo amin’ny Pejy Ofisian’ny ONE ao amin’ny Facebook.
Nanamafy ny tomponandraikitra omaly fa horaisina avokoa izay fanamarihana omen’ny olom-pirenena rehetra, ary ho atao fanadihadiana. Na izany aza anefa, raha ny fanomanana teknika rehetra mifandraika amin’ny tetikasa dia voalaza ho efa maty paika daholo. Isan’izany ny fijerena ny toerana hametrahana ireo andry hisy ny tariby, ny fijerena manokana ny maha harem-bakoka ny eny amin’ny faritra ambony, sy ny sisa hafa koa.
Marihina fa vinavinaina ho azo ampiasaina mialohan’ny taona 2023 ity fitaterana an-tariby ity.
ADY AMIN’NY KERE ANY ATSIMO: Vola mitentina 75,9 tapitrisa dolara ilaina maika
FAMPIATOANA FANDAHARANA: Natao hiantohana ny filaminam-bahoaka
FANAMBOARANA NY LALAM-PIRENENA FAHA-6: Tsy kobaka am-bava intsony fa asa avy hatrany
KAOMININA ANTANANARIVO : Hitondra fanatsarana ny Fasana Anjanahary